Xil-boobka & Magacaabista uu Sameeyay Axmed Ciise Cawad – news
Xil-boobka & Magacaabista uu Sameeyay Axmed Ciise Cawad
Baraha bulshada ayaa is qabsaday maalmihii lasoo dhaafay kadib hadal heynta ah in Axmed Ciise Cawad, oo ah kusimaha Wasiirka Arrimaha Dibada, uu si sharci darro ah ku magacaabay dan-jireyaal iyo qunsul, kuwaas oo gaaraya dhowr iyo toban.
Baraha bulshada ayaa aad u hadal hayey maalmihii lasoo dhaafay kadib fadeexadii magaabis sharci-darro ah oo uu geystay sii hayaha xilka Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad. Arrintan ayaa ah fashil weyn oo waji gabax ku ah Xukuumadda Farmaajo, maadaama ficilkani yahay boob iyo fowdo uu geystay nin aad ugu dhow Farmaajo iyo Fahad Yasin.
Dhacdadan foosha xun ayaa ku soo aadday xili ay xukuumaddu ku jirto xil-sii-heyn, oo aysan awood u laheyn in si nidaam ah dan-jireyaal loo magacaabo.
Waxaa kale oo xusid mudan in warqadaha magacaabista ay dhamaantood yihiin kuwo taariikhda dib loo dhigay, balse lagu soo beegay kadib xil-ka-qaadistii RW hore, Xasan Kheyre, sida Keydmedia Online ay soo qortay Shalay.
Warqadaha dekreetooyinka magacaabista oo ay aragtay Keydmedia Online ayaa gaaraya 25 xabo, oo ay ku jiraan dad aan shaqaale ka aheyn Wasaaradda Arrimaha Dibada, ama aan u tababarneyn hawlaha diblomaasiyada. Fadeexadan ayaa noqoneysa mid aad u baalmarsan xeerka shaqada iyo shaqaalaha loo maro markii dad loo qaadanayo Wasaaradda Arrimaha Dibada.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay Wasaaradda Arrimaha Dibada ayaa sheegaya in Wasiirka iyo Wasiir ku-xigeenadiisa ay mar hore kala tageen, maadaama ay ku kala aragti duwan yihiin hanaanka iyo socodsiinta hawlaha wasaaradda.